Inzwa yakakomberedzwa muApple Watch inogona kuita kuti itetepete | Ndinobva mac
Inzwa yakakombama paApple Watch inogona kuita kuti ionda
Panguva ino isu tatoziva kuti patents yakanyoreswa nekambani yeCupertino inogona kana kusasvika kumidziyo, asi izvo zvinoratidzwa neizvi patents mune dzakawanda zviitiko ndizvo zvinonyanya kufadza. Mune ino kesi iri patent iyo inoenderana neye optical sensors inoshandiswa muApple Watch uye ndizvo iwo akati siyanei akakombama kana ergonomic kune chimiro chewrist yedu.
Uye hongu, kana tichitarisa pazasi peiyo yazvino Apple Watch uye ese Apple akangwara mamodheru mamodheru, tinoona kuti vakavandudza ergonomics asi hapana chikonzero chatinogona kutaura kuti vane "zvakajairika" dhizaini dhizaini sekuvaziva kwatinoita.
Mawachi mazhinji akapindirana asi akangwara mawachi uye mune ino Apple mairi akakomberedzwa kunze, isu tine dumbu. Izvi zvinogona kuvandudzwa nema sensors matsva ayo Apple ari patenting sezvo ivo vaizobvumira chinja dhizaini yazvino yechikamu chezasi cheawa kuitira kuti vadzike zvishoma.
Iko kune zvakawanda chaizvo zvinhu zvinofanirwa kudzokororwa kuitira kuti "uderedze uremu" mudziyo uye mukati bvumidzwa yakawanikwa Iyo inongotaura nezve iyo yakakomberedzwa sensor senge iyo iwe yaunogona kuona mumufananidzo uri pamusoro. Pakupedzisira, ndezvekugadzirisa dhizaini yazvino modhi kuti iite yakatetepa, asi basa iri harisi nyore uye nderekuti Series 5 ine ukobvu hwakaenzana neiyo Series 4 kunyangwe chiri chokwadi kuti yakati rebei kupfuura iyo akateedzana 3. Gore rega rega mamirimita mashoma anowanikwa uye ma sensors uye vekunze vewatch vane zvakawanda zvekuita nehondo iyi yekupedzisira ukobvu. Tichaona zvinoitika mune ramangwana nezvizvarwa zvinotevera zveApple Watch, Parizvino zvinoita sekunge Series 6 ichaenderera nekugadzirwa kwakaenzana neyazvino modhi, iyo Series 5.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Inzwa yakakombama paApple Watch inogona kuita kuti ionda
Kuchave nemwaka wechipiri weiyo Ted Lasso akateedzana
Maitiro ekudzorerazve macOS ne macOS Kudzoreredza